ကြီးအောင်လုပ်လို့ရလား ? – Gentleman Magazine
လိင်တံကြီးအောင်လုပ်လို့ ရတဲ့နည်းလမ်းတွေ ရှိပါသလား ? ဘေးအန္တရာယ်ရော ကင်းရဲ့လား ? ခွဲစိတ်ပြုပြင်လို့ ရော ရနိုင်လား ? ယောင်္ကျားလေးတွေ အမေးများတဲ့ မေးခွန်းတွေပါ။ ယောင်္ကျားလေး တော်တော်များများက သူတို့ လိင်တံကို ရှိရင်းစွဲ အရွယ်အစားထက် ကြီးစေချင်တတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လိင်တံကြီးတဲ့အခါမှာ မိန်းကလေးတွေက ပိုသဘောကျတယ်လို့ ထင်ကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ မိန်းကလေးတွေက သူတို့ပါတနာရဲ့ ပစ္စည်းအရွယ်အစားထက် အထိအတွေ့၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေနဲ့ ချစ်တင်းနှောတဲ့နည်းစနစ်တွေစတဲ့ အရေးကိစ္စတွေပေါ်မှာ ပိုမိုသာယာခံစားတတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အမျိုးသားတွေက သူတို့လိင်တံအရွယ်အစားကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ဖို့ စိတ်သန်နေကြတုန်းပါပဲ။ ကုလားရှင်ပြုသလို ထိပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့နည်းက အပြင်ကိုအနည်းငယ်ရှည်ထွက်လာစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ အမာရွတ်ကျန်နေခဲ့ရင် အချိန်ကြာကြာထောင်မတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်သလို နာကျဉ်မှုကိုလည်း ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အဆီထိုးသွင်းတဲ့နည်းလမ်းကရော။ ဒီနည်းလမ်းက သင့်ပစ္စည်းကို အနည်းငယ် ပိုကြီးလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ကတော့ အရမ်းများတဲ့ အတွက် မလုပ်သင့်ပါဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းကတော့ အမျိုးသားတွေရဲ့ ပစ္စည်းကို အရှည်ရော လုံးပတ်ပါ ကြီးလာစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိရိယာတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေကို အ၀တ်အစားအောက်မှာနေ့တိုင်းဝတ်ဆင်ထားရမှာ ဖြစ်ပြီး ၆ လ နှင့် အထက်ကြာမှ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာကို စမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၆ လ လောက် သင် ဒါ ကိုနေ့ တုိုင်းလုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေပြီဆို သင်တစ်ခုခုတော့ လွဲနေပါပြီ။
သာက်လို့ရတဲ့ ဆေးဝါးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားမရှိပါဘူး။
တကယ်တမ်းတော့ ကိုယ့်ပစ္စည်းကို သေးတယ်လို့ထင်နေကြတဲ့ အမျိုးသားတိုင်းမှာ ပုံမှန်အရွယ်အစားရှိနေပြီးသားပါ။ နေရာဒေသအလုိုက် တောင့်နေတဲ့ အချိန် ၅.၁ လက်မက နေ ၅.၆ လက်မ အတွင်းရှိရင်ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအရွယ်အစားနဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ပါတနာကို ကြုံတွေ့နေရမယ်ဆိုရင် ဒီအတိုင်းကိုပဲ ယုံကြည်မှုရှိနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း အမျိုးသားတွေက အပြာကားတွေထဲက အရွယ်အစားတွေကိုကြည့်ပြီး စိတ်အားငယ်နေတတ်ကြပါသေးတယ်။ သတိထားရမှာက ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ် ဂရုစိုက်ပါ။ ရေရှည်အသုံးခံပြီး ဘေးကင်းဖို့က အဓိကဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့။
လိငျတံကွီးအောငျလုပျလို့ ရတဲ့နညျးလမျးတှေ ရှိပါသလား ? ဘေးအန်တရာယျရော ကငျးရဲ့လား ? ခှဲစိတျပွုပွငျလို့ ရော ရနိုငျလား ? ယောင်ျကြားလေးတှေ အမေးမြားတဲ့ မေးခှနျးတှပေါ။ ယောင်ျကြားလေး တျောတျောမြားမြားက သူတို့ လိငျတံကို ရှိရငျးစှဲ အရှယျအစားထကျ ကွီးစခေငျြတတျကွပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ လိငျတံကွီးတဲ့အခါမှာ မိနျးကလေးတှကေ ပိုသဘောကတြယျလို့ ထငျကွလို့ ဖွဈပါတယျ။ တကယျတမျးတော့ မိနျးကလေးတှကေ သူတို့ပါတနာရဲ့ ပစ်စညျးအရှယျအစားထကျ အထိအတှေ့၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာအခွအေနနေဲ့ ခဈြတငျးနှောတဲ့နညျးစနဈတှစေတဲ့ အရေးကိစ်စတှပေျေါမှာ ပိုမိုသာယာခံစားတတျကွတာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး အမြိုးသားတှကေ သူတို့လိငျတံအရှယျအစားကို ပွောငျးလဲပဈနိုငျဖို့ စိတျသနျနကွေတုနျးပါပဲ။ ကုလားရှငျပွုသလို ထိပျဖွတျလိုကျတဲ့နညျးက အပွငျကိုအနညျးငယျရှညျထှကျလာစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးအနနေဲ့ အမာရှတျကနျြနခေဲ့ရငျ အခြိနျကွာကွာထောငျမတျနိုငျတော့မှာမဟုတျသလို နာကဉျြမှုကိုလညျး ခံစားရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ အဆီထိုးသှငျးတဲ့နညျးလမျးကရော။ ဒီနညျးလမျးက သငျ့ပစ်စညျးကို အနညျးငယျ ပိုကွီးလာစနေိုငျပါတယျ။ ဘေးထှကျဆိုးကြိုး ကတော့ အရမျးမြားတဲ့ အတှကျ မလုပျသငျ့ပါဘူး။
လှနျခဲ့တဲ့နှဈအနညျးကတော့ အမြိုးသားတှရေဲ့ ပစ်စညျးကို အရှညျရော လုံးပတျပါ ကွီးလာစနေိုငျတယျဆိုတဲ့ ကိရိယာတှေ ထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီပစ်စညျးတှကေို အဝတျအစားအောကျမှာနတေို့ငျးဝတျဆငျထားရမှာ ဖွဈပွီး ၆ လ နှငျ့ အထကျကွာမှ အကြိုးသကျရောကျမှုရှိတာကို စမျးသပျတှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၆ လ လောကျ သငျ ဒါ ကိုနေ့ တုိုငျးလုပျဖို့ စဉျးစားနပွေီဆို သငျတဈခုခုတော့ လှဲနပေါပွီ။
သာကျလို့ရတဲ့ ဆေးဝါးတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ကတော့ ခိုငျလုံတဲ့သကျသအေထောကျအထားမရှိပါဘူး။
တကယျတမျးတော့ ကိုယျ့ပစ်စညျးကို သေးတယျလို့ထငျနကွေတဲ့ အမြိုးသားတိုငျးမှာ ပုံမှနျအရှယျအစားရှိနပွေီးသားပါ။ နရောဒသေအလုိုကျ တောငျ့နတေဲ့ အခြိနျ ၅.၁ လကျမက နေ ၅.၆ လကျမ အတှငျးရှိရငျပုံမှနျဖွဈပါတယျ။ လကျရှိအရှယျအစားနဲ့ အဆငျပွတေဲ့ပါတနာကို ကွုံတှနေ့ရေမယျဆိုရငျ ဒီအတိုငျးကိုပဲ ယုံကွညျမှုရှိနမှောပါ။ ဒါပမေယျ့လညျး အမြိုးသားတှကေ အပွာကားတှထေဲက အရှယျအစားတှကေိုကွညျ့ပွီး စိတျအားငယျနတေတျကွပါသေးတယျ။ သတိထားရမှာက ကိုယျ့ပစ်စညျးကိုယျ ဂရုစိုကျပါ။ ရရှေညျအသုံးခံပွီး ဘေးကငျးဖို့က အဓိကဆိုတာကို မမပေ့ါနဲ့။
Previous: သင့် ကျားအင်္ဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ ၁၀ ချက်
Next: လူတွေကို ကြင်နာစွာ ဆက်ဆံတတ်ဖို့